Ngenxa yeCovid manje banamanzi | Scrolla Izindaba
Sekuyiminyaka eyi-15 imindeni emibili idonsa kanzima ingenawo amanzi ezindlini zayo zomxhaso.
Manje ngenxa ye-Covid, inkinga yabo yamanzi isizolungiswa.
Sekuphele iminyaka eyi-15 besebenzisa izindlu zangasese zomakhelwane babo kanye namanzi.
Kodwa ngenkathi kuqala ubhubhane – omakhelwane babo bacele ukuthi bayeke ukusebenzisa amanzi kanye nezindlu zangasese zabo.
Umasipala uphoqeleke ukuthi uphendule.
Inkinga iqale ngesikhathi usonkontileka owakha lezi zindlu ezimbili elokishini lase-Kleinskool, kuMasipala waseNelson Mandela Bay, engaxhumi amanzi.
“Kusukela ngowezi-2005 ngesikhathi kwakhiwa lezi zindlu asikaze sibe namanzi okuphuza noma izindlu zangasese ezishaywayo. Mina nezingane zami eziyisithupha kudingeke ukuthi sincenge omakhelwane ukuthi sisebenzise izindlu zabo zangasese,” kusho uDoris Philip oneminyaka engama-59.
“Besilokhu sibuyela emuva ehhovisi lekhansela phambilini ngaphandle kwempumelelo.”
Uthe, okwenza izinto zingabekezeleleki kakhulu istamkoko esisegcekeni lakhe ebesilokhu sigcwala.
“Kudala iphunga elibi kabi kangangokuthi asisakwazi ngisho nokudla ukudla kwethu,” kusho uDoris.
Umakhelwane wakhe, uNombeko Jacobs oneminyaka engama-54 uthe, wayejwayele ukuya endlini yangasese emzini kamfowabo.
“Kodwa njengoba sekukhona leli gciwane le-corona, uyanqikaza. Angimsoli ngoba i-corona iningi kakhulu lapha. Kwesinye isikhathi ngigeza izandla zami emanzini emvula asemgwaqeni ngemuva kokusebenzisa indlu yangasese yomfowethu.”
Ikhansela lewadi uGeorgina Faltdman uthe, waziswa ngale nkinga ngempelasonto edlule.
“Kodwa ngibize usonkontileka owakha lezi zindlu futhi bamatasa nokuxhuma amapayipi amanzi nezindlu ezithintekile okwamanje,” kusho uFaltdman.